राजधानीबासीले हेरे प्यूठानको किसान आन्दोलन
काठमाडौं – वि.सं. २०१० सालमा प्यूठानमा भएको किसान आन्दोलनलाई प्रमुख विषय बनाएर निर्माण गरिएको फिल्म ‘फाल्गुन २४’को विशेष शो गरिएको छ । नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनका नेता मोहनविक्रम सिंहद्वारा लिखित फिल्म विश्वज्योती चलचित्र भवनमा विशेष शो गरिएको हो । रक्तिम सांस्कृतिक अभियान काठमाडौंले आयोजना गरेको विशेष शोमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका ..
बुटवल – रुपन्देहीको पश्चिम क्षेत्रबाट बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी जोड्ने विभिन..
फुङमुचे नेपाली कागज उद्योग नेपालकै उत्कृष्ट
सोलुखुम्बु – सोलुखुम्बुको दूधकुण्ड नगरपालिका–१ मा सञ्चालित फुङमुचे नेपाली ..
दुई बैठकपछि लेखा समितिले दियो फास्ट ट्रयाक समयमै सक्न यस्तो निर्देशन
काठमाडौं –संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले आर्थिक बर्ष २०७६–७७ भित्र फास्ट ट्रयाक न..
औद्योगिक प्रदर्शनीमा ५ करोड बढी कारोबार
काठमाडौं–राजधानीको भृकुटीमण्डपमा एक साता चलेको २८ औं राष्ट्रिय औद्योगिक वस्तु तथ..
व्यापार घाटा बढ्यो, ६ महिनामा ४ सय २८ अर्ब व्यापार घाटा
काठमाडौं–नेपाल राष्ट्र बैंकले व्यापार घाटा बढ्दै गएको जनाएको छ । गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले चालू आर्थिक वर्ष भित्र ४ सय २८ अर्व ३३ करोड व्यापार घाटा रहेको जानकारी गराए । मंगलबार बसेको व्यवस्थापिका संसद अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै उनले चालू आर्थिक वर्षको ६ महिना भित्र ३७ अर्ब मात्रै निर्यात व्यापार भएको तर आयात व्यापार भने [&hel..
सहूलियत ऋणबाट महिला उद्यमीको चमत्कार ! (फोटोफिचर)
काठमाडौं–घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिले सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउन थालेपछि गाउँ गाउँमा साना साना लगानीका घरेलु उद्योगहरु खुल्न थालेका छन् । घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिले घरेलु तथा साना उद्योगहरुको विकास र विस्तारका लागि संस्थागत रुपमा प्रर्वधनात्मक सेवाहरु उपलब्ध गराउन थालेपछि स्थानीय स्तरमा साना उद्योगहरु पनि संस्थागत ह..
चिनियाँ प्रतिनिधीद्धारा कपिलवस्तुमा कृषिफर्म अवलोकन
हरि अधिकारी कपिलवस्तु– चिनियाँ सरकारको ४१ सदस्यीय टोलीले कपिलवस्तुको वाणगंगा नगरपालिका १ स्थित कपिलवस्तु इन्टिग्रेटेड एग्रो फर्मको अवलोकन गरेको छ । उक्त ४१ सदस्यीय टोलीले कृषि, पर्यटन तथा पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्नेबारे सम्भाब्यता अध्ययन गर्न कपिलवस्तु आएको हो । चीन सरकारको वन बेल्ट वन रोड परियोजना अन्तरगत लुम्बिनी भ्रमणका क्र..
कास्कीको कफी प्रर्वद्धनमा दाताको सहयोग हुने
पोखरा– कास्कीको कफी प्रवद्र्धनमा दाताहरुको सहयोग रहने पोखरामा आयोजित एक कार्यक्रममा जानकारी दिइएको छ । गुड नेवर्स इन्टरनेशनल नेपालको सहयोगमा नौलो घुम्ती नेपालको अयोजना तथा जिल्ला कफी सहकारी संघको समन्वयमा भएको छलफलमा सो कुराको जानकारी दिइएको हो । कार्यक्रममा दिइएको जानकारी अनुसार नौलो घुम्ती र वालवालिकाको क्षेत्रमा काम गर्दै आएक..
मोरङ – व्यावसायिक तरकारी खेती गर्दै आएका मोरङको महादेवा–१ का यामलाल दासको परिवार सुकुम्बासीबाट मालिक बनेकोे छ । आजभन्दा करिब १० वर्षअघि रतुवा खोला छेउको ऐलानी जग्गामा सुकुम्बासीका रुपमा बसेका यामलाल परिवार पाल्न दास सात वर्षअघिसम्म रोजगारीका लागि भारतको पञ्जावमा मजदुरी गर्थे । अर्काको देशमा मजदुरी गर्दा पनि परिवारको छाक टार्न कठ..
चितवन – बैंक एवम् वित्तीय संस्थाले ऋण नदिएपछि यहाँ निकै फस्टाएको जग्गाको व्यवसाय प्रभावित हुन थालेको छ । घर जग्गा र अन्य कुनै पनि शीर्षकमा बैंकले सहजै ऋण दिएका छैनन् । कतिपयले महँगो ब्याजदरमा बैंक र सहकारीबाट ऋण लिएर आफ्नो गर्जो टारिरहेका छन् । साना टुक्रादेखि ठूला प्लटसम्म नपुग रकम बैंकको भरमा बैनाबट्टा गर्नेहरु अहिले [&helli..
जुम्ला – यहाँको पटमारा गाविसका महिला उद्यमी यतिबेला फापर उत्पादनमा अकर्षित भएका छन् । यो बालीका लागि पटमारा–२ का महिलाले लघुउद्यम सुरु गरेका छन् । एउटै वडाका महिलाले प्रतिस्पर्धात्मक रुपले उत्पादन गर्ने उद्देश्यले डाँफे, प्रगतिशील र महारुद्र नामका तीन समूह पनि गठन गरेका छन् । यिनै समूहमा रहेका महिलाको सक्रियतामा फापर अन्न तथा प..
बैंकहरुलाई धितोपत्र बोर्डको निर्देशन
काठमाडौ– नेपाल धितोपत्र बोर्डले आश्वा प्रणालीमा अवद्ध बैंकहहरुलाई सेवा प्रवाहमा समस्या भए बेर्डमा सम्पर्क गर्न आग्रह गरेको छ । बोर्डबाट हालसम्म ४१ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु आस्वा प्रणालीमा सहभागी भई सेवा प्रदान गर्न अनुमति पाएका छन् । तर, हालैको सार्वजनिक निष्काशनमा यस प्रणालीमा सहभागी कतिपय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट सह..
पहिलो पटक फलफूल बिक्री वितरण केन्द्र
इनरुवा – सुनसरीको सीमावर्ती क्षेत्रमा पहिलो पटक फलफूल बिक्री वितरण केन्द्र बन्ने भएको छ । स्थानीयको पहल र गरिबी निवारण कोषको आर्थिक सहयोगमा सीमा क्षेत्रमा पर्ने साहेवगन्ज गाविसमा फलफूल बिक्री केन्द्र बन्ने भएको हो । फलफूल बिक्री केन्द्र आठ लाख गरिबी निवारण कोषको सहयोग र दुई लाख बराबरको जनश्रमदानसहित १० लाखको लागतमा निर्माण..
सङ्घीय संरचनाको ढाँचामा बिमा संस्थानको रुपान्तरण आवश्यक
काठमाडौँ – उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले राष्ट्रिय बिमा संस्थानलाई संस्थाको सङ्गठनात्मक संरचनालाई सङ्घीय संरचनाको ढाँचामा रुपान्तरण गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । बिमा संस्थान ५० औँ वर्ष प्रवेशका अवसरमा संस्थान परिसरमा निर्माण गरिएको स्वर्ण जयन्ती स्मारकको आज अनावरण गर्दै उनले सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालित बिमा..
८ हजारको लगानीले मासिक ५० हजारको आम्दानी
काभ्रे – उग्रचण्डी नाला गाविस– २ कोइपाटोलका महेश श्रेष्ठले मोबाइल, टेलिभिजन, रेडियो, घडीलगायत सामग्री मर्मत गरेर मासिक रु ५० हजार आम्दानी गर्दै आएको छ । इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङ विषय पढेका श्रेष्ठले आफूले पढेको विषयलाई व्यवहारमा उतार्नु भएको हो । उनले आफ्नो घरमै इलेक्ट्रोनिक पसल सञ्चालन गरेका छन् । पढेको कुरालाई व्यवहारमा उता..
सोलुखुम्बु – सोलुखोला जलविद्युत् आयोजनाको ४० प्रतिशत निर्माण कार्य भएको छ । अप्पर सोलुखोला हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनीले निर्माण गरिरहेको २३ मेगावाट क्षमताको आयोजना निर्माण ४० प्रतिशत काम सकिएको आयोजनाले जनाएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले सन् २०१० मा सो आयोजना निर्माणका लागि अनुमति दिएको थियो । सन् २०१५ को मध्यबाट २२ महिनामा आयोजना निर..
पशु बिमाबाट करिव नौ करोड संकलन
दोलखा – पशुको बिमाबाट दोलखा जिल्लामा हालसम्म आठ करोड ९२ लाख ६४ हजार राजस्व सङ्कलन भएको छ । पशु सेवा कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामा मात्र करिब चार हजार पशुको बिमा गरिएको छ । पशु पालनमा किसानको आकर्षण बढ्दै गएको र माघ महिनामा मात्रै तीन सय ८१ पशुको बिमा गरिएको छ । जसको […]
स्नातकतह अध्ययनसँगै गाउँका विद्यार्थी तरकारी खेतीमा लागे
मोरङ – तरकारी खेती गर्ने भन्नेबित्तिकै शैक्षिक योग्यता नपुगेर होला वा विदेशमा हन्डर खाएर फर्केका युवा सम्झने गरिन्छ । तर त्यसको विपरीत मोरङको ग्रामीण भेग कदमहा, रङ्गेली, अमाही बरियाती, सिसवनिजहदा र कटहरीका युवा कृषक स्नातक तहमा अध्ययन गर्दै तरकारी खेती गर्दै आएका छन् । अमाही बरियातीका सुवासचन्द्र गच्छदार विराटनगरको महेन्द्..
धनगढी – नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा चिरञ्जीवी नेपालले समग्र देश विकासका लागि वित्तीय अवस्थामा सुधार हुन आवश्यक रहेको बताएका छन् । कैलालीको अत्तरियामा आज भएको वित्तीय साक्षरता अभियानमा उनले पैसा चलाउन नजानेका कारण देश गरिबीको अवस्थामा पुगेको बताए । मिडिया इन्टरनेशनलको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंक धनगढीका निर्दे..
साताको नेप्से ३२ अङ्कले ओर्लियो
काठमाडौँ – साताको नेप्से परिसूचक पहिलो दिनको तुलनामा ३१ दशमलव ८९ अङ्कले घटेको छ । गतसाता ९१ दशमलव ३५ अङ्कले बढेको थियो । यो साताको अन्तिम दिन परिसूचक एक हजार ३३७ दशमलव ४६ अंकमा पुगेको छ । यस साता नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा १६१ कम्पनीको कारोबार भएको छ । जसअनुसार २८ हजार ०६८ कारोबारबाट रु दुई अर्ब […]
काठमाडौँ – साताको नेप्से परिसूचक पहिलो दिनको तुलनामा ३१ दशमलव ८९ अङ्कले घटेको छ । गतसाता ९१ दशमलव ३५ अङ्कले बढेको थियो । यो साताको अन्तिम दिन परिसूचक एक हजार ३३७ दशमलव ४६ अङक्मा पुगेको छ । यस साता नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा १६१ कम्पनीको कारोबार भएको छ । जसअनुसार २८ हजार ०६८ कारोबारबाट रु दुई […]
मोरङ – मोरङ पथरी शनिश्चरेका महिला अहिले व्यावसायिक च्याउखेतीतर्फ आकर्षित भएका छन् । च्याउखेतीबाट राम्रो आम्दानी हुन थालेपछि उनीहरु यसतर्फ आकर्षित भएका हुन् । समूह बनाएर नै उनीहरु च्याउखेती गर्दै आएका छन् । सुरुमा समूह बनाएर काम गर्नै समस्या परेको पथरी शनिश्चरे– १२ की पार्वतीदेवी यादव बताउँछन् । पाँच÷पाँच जनाको समूहमा च्याउखेती स..
म्याग्दी – मकैको बीउमा म्याग्दी जिल्ला आत्मनिर्भर बनेको छ । मुख्य खाद्यबालीको रुपमा रहेका मकैको खेतीका लागि आवश्यकपर्ने बीउ जिल्लामै उत्पादन हुन थालेपछि बीउमा आत्मनिर्भर भएको हो । मकै खेतीका लागि वार्षिक २० मेट्रिकटन बीउ आवश्यकपर्ने म्याग्दीमा ३९ मेट्रिकटन बीउ उत्पादन हुने गरेको जिल्ला कृषि विकास कार्यालय म्याग्दीले जनाएको छ । ..
म्याग्दी – घार गाविस– ५ मा रहेको हिमालयन चिज उद्योगले एक वर्षको अवधिमा ३३ लाखको चिज बिक्री गरेको छ । हिमालयन चिज उत्पादन कृषि सहकारी संस्थाद्वारा सञ्चालित सो उद्योगले २०७२ फागुनदेखि २०७३ माघ महिनासम्म चार हजार ४०० किलो चिज बिक्री गरेको हो । प्रतिकिलो रु ७५० का दरले चिज बिक्री गरेको सो संस्थाका अध्यक्ष नारायण […]